Uncategorized | The World of Pinkgold
ဒီလိုဆောင်းပါး ပုံစံမျိုးကိုရေးဖို့ ခုချိန်မှာ မလိုတော့ဘူးလို့ ကျွန်မ ထင်ခဲ့မိတယ်.. အဲ့လိုထင်နေတုန်းမှာပဲ ဒီဆောင်းပါးမျိုးဟာ ရေးနေဖို့ ပြောနေဖို့ လိုအပ်ဆဲမှန်း ကျွန်မသိလာရတယ်။ ရှာကြ၊ ဖတ်ကြ၊ သိကြတဲ့ သူတွေကို ကျွန်မမရည်ရွယ်ပါဘူးဆိုတာကိုတော့ အလေးအနက်ပြောပါရစေရှင်။ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ အင်တာနက်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ဗဟုသုတ ရှာမှီးနေသူတွေပါ။ တစ်ချို့အတွက်ကတော့ အင်တာနက်ဆိုတာ ဗဟုသုတ ရှာဖို့ သက်သက် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု သိချင်တယ် ရှာချင်တယ်ဆိုရင် Google ကိုတော့ အားကိုးရတာ အမှန်ပါပဲ။ သိချင်တာတွေအပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ ရှာကြတယ်.. အဖြေတွေ ထွက်ချင်သလို ထွက်လာတယ်.. ဒီလို ထွက်လာတဲ့ အဖြေတွေထဲကပဲ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးတွေကို ကျွန်မတို့ ရွေးထုတ်ကြတယ်.. နောက်ပြီး Social Media တွေကနေတစ်ဆင့် ကျွန်မတို့ ရှာဖွေရင်း တွေ့လာ သိလာတာတွေကို မျှဝေကြတယ်.. ဒါကြောင့်ပဲ ဒီလိုမျိုးတွေကို တစ်ကယ်လိုအပ်နေတဲ့ တစ်ခြားသူတွေအတွက် အဆင်အသင့်ဆုံးသော အဖြေတွေရှိလာတယ်.. တစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် အများကောင်းကျိုးဖြစ်ရတယ်လို့ပဲ ဆိုလိုက်ပါရစေ။ သူလည်းရှာတယ်.. ကိုယ်လည်းရှာတယ်.ု.. ရှာလို့ရလာတာတွေကို သူလည်း မျှဝေတယ်.. ကိုယ်လည်း မျှဝေတယ်.. ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီလိုလုပ်နေခြင်းတွေဟာ တစ်ခြားလူတွေကို အကျင့်ပျက်ရာ ရောက်စေသလား.. ကိုယ့်အားကို ကိုးဖို့ တွန်းအားမပေးရာ ရောက်နေသလားလို့ ကျွန်မ စဉ်းစားမိတယ်။ တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေဟာ.. တစ်ခုခုကို သိချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်အရင် ရှာကြည့်ဖို့ထက်.. သူများကို မေးဖို့ကို ဦးတည်နေတတ်ကြတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ Ready Made တွေကို လိုချင်တတ်ကြတာပေါ့။ ငါ့မှာ အဲ့ဒါမျိုး ရှာထားတာ မရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်မိရင်ပဲ “ဒါဆိုရှာပေးလေ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ပြောဖို့ ၀န်မလေးကြတော့ဘူး။ “ဘယ်လိုရှာရမလဲ” လို့ မေးတာကို ကျွန်မ လေးစားပေမယ့်.. “ရှာပေးလေ” လို့ ပြောတာမျိုးကိုတော့ ကျွန်မ သည်းမခံနိုင် ဖြစ်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက် သုံးစွဲမှု အကန့်အသတ်တွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း Youtube, Flickr နဲ့ အခြား Ban ထားတဲ့ ဆိုဒ်မျိုးမှာရှိတဲ့ Information တွေအတွက် နိုင်ငံခြားက အရမ်းကိုရင်းနှီးသူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကို “ရှာပေးလေ” လို့ အနိုင်ကျင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ “ရှာပါ” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Read the rest of this entry →
Second Anniversary of Nargis!!
Posted on May 2, 2010 by cuttiepinkgold
Let’s do more for Climate Justic.
Let’s do more to save our Earth.
Let’s do more to create the worldabetter for our children and grandchildren.
Yes, we all have the responsibilities for the better future of the world.